प्रेम गर्न पनि के चाडपर्व पर्खनु
नेपालमा पछिल्लो समय प्रेम दिवसले व्यापकता पाउँदै गएको छ । खासगरी १४ फेब्रुअरीलाई प्रेम दिवसको मुख्य दिन मानिए पनि यो दिवसको एक हप्ताअघिदेखि नै चर्चा परिचर्चा र विभिन्न दिनका रूपमा यो दिवसले व्यापकता फैलाउँदै लगेको छ । फेब्रुअरी १४ मात्र होइन, फेब्रुअरी ७ देखि नै भ्यालेन्टाइन डेको महŒवपूर्ण दिन शुरु हुने गर्छन् । रोज डे, पर्पोज डे, चक्लेट डे, टेड्डी डे, प्रमिस डे, हग डे, किस डे र भ्यालेन्टाइन डे । तथापि, नेपाली समाजमा भने खासगरी १४ फेब्रुअरीलाई विशेष लिने गरिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा यो दिवसको खासै चर्चा परिचर्चा नभए पनि पछिल्लो पुस्तामा भने यो झाँगिदो छ ।
प्रविधिको विकाससँगै विश्व साँघुरिँदै गएको छ । यो सँगै विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरण हुँदै पश्चिमी परिवेशका संस्कृति पनि विश्वभर परिचित भइसकेका छन् । क्रिसमस, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष आदि यहाँको परिवेशमा नौलो रहेनन् । त्यस्तै, भ्यालेन्टाइन डे पनि यहाँको परिवेशमा खासगरी युवामाझ चर्चित बन्दै गएको छ । त्यसैले त यो विशेष अवसरमा युवायुवतीबीच प्रेम साटासाट गर्नु, कार्ड र फूल आदानप्रदान गर्नु, कुनै निश्चित स्थानमा घुम्न जानु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीमात्र होइन, प्रेम गर्ने तरखरमा रहेका युवायुवतीका लागि पनि भ्यालेन्टाइन डे को दिन उपयुक्त मानिन्छ । यस दिन युवायुवती आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई रातो गुलाबको फूल, कार्ड र उपहार दिई प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन् । त्यसो त, मोबाइल फोन, एसएमएस, फेसबुक र नियमित च्याटले उनीबीच धेरै कुराकानी भइसकेका हुन्छन् र मनका कुरा अलिअलि खोलिसकेका हुन्छन् तर पनि भ्यालेन्टाइन डेमा सरप्राइज गिफ्ट दिने, सरप्राइज प्रेम प्रस्ताव राख्नाले सम्बन्ध अझ प्रेमिल बन्छ भन्ने विश्वास रहेको पाइन्छ ।
युवायुवतीमात्र होइन, वयस्क जोडी पनि यो विशेष अवसरमा आफ्ना पार्टनरलाई विशेष उपहार दिने र डिनर गर्न लैजाने आदि सामान्य बनिसकेको छ । खासगरी शहरीयाजनमा त यो एक प्रकारको संस्कृति नै बन्न थालेको छ । प्रेम दिवस पाश्चात्य संस्कृति भए पनि यो विशेष दिनले दाम्पत्य जीवन वा पार्टनरमा अझ प्रेम, आदर, सम्मान बढाउने उनीहरूको तर्क छ । त्यसो त, यस संस्कृतिलाई पश्चिमेली छाडा संस्कृतिको संज्ञा दिनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । हुन त चोखो माया र प्रेम गर्न न कुनै मौसम चाहिन्छ, न चाड नै । आपसमा प्रेम, सद्भाव र माया बढाउने चाड वा अवसर हामीमाझ नै यथेष्ट रहेका छन् ।
युवायुवती भ्यालेन्टाइन डेमा रमाइरहेकै बेला केही मानिसले भने यसलाई नेपाली संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण भनी चिन्ता गरेका छन् । अहिले हामीहरू हाम्रा चाडपर्वलाई बेवास्ता गरी पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाइरहेका छौँ । पश्चिमेली संस्कृतिको रूपमा हेरिँदै आएको यो पर्व बिस्तारै पूर्वीय समाजमा पनि प्रचलित बन्दै गएको छ । युवा पुस्तामाझ यसलाई विशेष अवसरकै रूपमा लिन थालिएको छ । सूचना र प्रविधिले साँघुरिँदै गएको विश्वमा एक ठाउँको संस्कृति वा पर्व विश्वभर नै पुग्ने गर्छ । यसलाई कुनै भौगोलिक सीमामा मात्र सीमित राख्न सकिन्न । प्रेम दिवसकै दिन एक थुङ्गा फूल दिएरमात्र चोखो प्रेम प्राप्त गर्न सकिएला र ?
एउटा बादशाहले प्रेमको प्रतीकका रूपमा ताजमहल बनाए । आफ्नी प्रेमिकाका लागि रोमन सम्राट् एन्टोनीले इजिप्टमा धावा बोलेका थिए । प्रेम प्रसङ्गमा आज पनि रोमियो–जुलियट, लैला–मजनुका प्रेम प्रसङ्ग चर्चामा रहने गर्छन् । बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई, त्यही सन्तानले बाबुआमालाई, सच्चा देशभक्तले देशलाई गर्ने प्रेमजस्तो महान् प्रेम अरू के होला ?
केहीले देहका लागि पे्रम गर्छन् त केहीले आत्मीय प्रेम । प्रेम त न यसको शुरु हुन्छ, न यसको अन्त्य नै । यसमा न कुनै स्वार्थ हुन्छ न कुनै प्राप्ति । अहिले आएर भ्यालेन्टान डे लाई प्रेम दिवसको रूपमा हामीकहाँ चर्चा गर्न थालिए पनि ‘प्रेम’ शब्द संस्कृतबाट विकसित भएको हो, जसको अर्थ हुन्छ– ‘इच्छा’ वा ‘कामना’ । प्रेमलाई प्रीति, माया, ममता, अनुराग, स्नेह, प्रणय, प्यार आदि विविध अर्थमा प्रसङ्ग गरिन्छ । विश्व प्रेमको परिधिमा नै सञ्चालित भएको हुन्छ । प्रेमले नै मानिसलाई आशा, धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता प्रदान गर्छ । जसले प्रेमलाई बोध गरेको हुन्छ, उसको निम्ति प्रेम धैर्य हो, प्रेम सहिष्णुता हो, प्रेम प्रतीक्षा हो, प्रेम सेवा हो । शिष्टता, विनम्रता, सौम्यता, भद्रता, अनुग्रह, करुणशीलता, नम्रता प्रेमकै अभिव्यक्ति हुन् । प्रेम पदार्थमा हुन्छ, प्रेम चेतनामा हुन्छ । प्रेम मायालुको आँखामा हुन्छ, प्रेम पत्नीको ईष्र्यामा हुन्छ, प्रेम आमाको बोलीमा हुन्छ, बाबुको हप्काइमा हुन्छ । प्रेम मातृत्वमा खेल्छ, भ्रातृत्वमा बाँँच्छ, मित्रतामा हाँस्छ । यत्रतत्र सर्वत्र सबैतिर प्रेम छर्न सके सबैतिरबाट प्रेम नै पाइन्छ । प्रेमलाई दिवस रूपमा होइन हरेक दिनका आफ्ना क्रियाकलापमा जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रेम देश प्रेम हो । प्रेममै सबै धर्म, दर्शन अध्यात्म र रहस्यवादको प्रकृति हो, सत्व हो । प्रेमलाई सस्तो रूपमा नबुझौँ ।
प्रेमका नाममा पछिल्लो समयमा हत्या हिंसा समेत हुने गरेका छन् । कति सजिलै भन्छन् म तिमीलाई माया गर्छु तर त्यही माया गर्छु भन्ने मान्छे राक्षसको रूपमा प्रस्तुत भएका घटना धेरै छन् । पूर्विया संस्कृतिको रूपमा आएको भए पनि प्रेम दिवस मनाइरहँदा प्रेमलाई सस्तो नबनाइयोस् । कुनै दिन यस्तो नओस प्रेम भन्ने शब्दप्रति नै घृणा उत्पन्न नहोस् । प्रेम दिवस मनाइरहँदा घात प्रतिघात र क्षणिक माया प्रेमभन्दा पनि सर्वत्र प्रेममय होस् ।